IT သမားကောင်းတစ်ယောက် ဘာတွေသိသင့်ဖို့လိုအပ်သလည်း ? | Myanmar Tech Press
IT သမားကောင်းတစ်ယောက် ဘာတွေသိသင့်ဖို့လိုအပ်သလည်း ?
2018-01-10 2018-04-06 Admin နည်းပညာ
သမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအရည်အချင်းမျိုးတွေရှိနေသင့်လဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ မိမိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်လိုသော IT Type ပေါ်မူတည်ပြီး မည်သို့သော IT Speciality မျိုးကိုလေ့လာသင့်လဲ၊ ဘယ်လို Skill မျိုးရှိသင့်သလဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ လူသားတစ်ယောက်အတွက် ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဆိုတာ မိမိဝါသနာပါသောအလုပ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းလဲပါဝင်နေပြန်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သင်ဟာ IT လုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို IT လုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်လိုလဲစဉ်းစားပါ။
(1) ပထမဆုံးအခြေခံအားဖြင့် Speciality ကို စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် ဥပမာ – Software (Developing/Implementation) အပိုင်းကိုသွားမလား? Network (System/Security/Switching & Routing) အပိုင်းကိုသွားမလား? ဘယ်လိုအပိုင်းမျိုးကိို ပိုစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတာ သေချာစဉ်းစားပါ။
ဒီအပို်ုင်း ၂ ပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး အခွဲတွေထပ်ရှိနေအုန်းမလည်းဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါမယ်။
Software Implementation ပိုင်းမှာ Developing ကိုတိုင် ၀င်လုပ်တဲ့ Developer ရယ် Development ပိုင်းကို Management လုပ်ရတဲ့ Project Manager ရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
Project Management ပိုင်းဆိုလျှင်တော့ သင်ဟာ Project management ပိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ development methods တွေကိုလေ့လာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Requirements Analyzing, SSADM, DSDM, Timeboxing, Risk Management, Legal Ethical and Social Issues, Evaluation, User Training အစရှိသည်တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာသိထားဖို့လိုပါတယ်။
Project Management ပိုင်းအတွက် အောက်ပါအချက်များကို စနစ်တကျဖြတ်သန်ူနိုင်ရန်အတွက် အထက်ပါ အရာများကို လေ့လာသင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Requirements Analyzing – Software တစ်ခု တည်ဆောက်တော့မည်ဆိုလျှင် ထိုအရာအတွက် မည့်သည့် အရာများလိုအပ်သနည်း။ ၄င်းအရာများထဲမှ မည်သည့် အရာက အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သနည်း စသည်ဖြင့်ခွဲထုတ်ခြင်းပါ။ ဥပမာ – online shopping website တစ်ခုတည်ဆောက်မည်ဆိုလျှင် website အတွက် အကြမ်းဖြင်းလိုအပ်သည်များမှာ “Items upload, Price, Total Price, Login, Logout,Order, Purchase, Item Categories” အစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းအရာများထဲမှ အရေးအကြီးဆုံးမှာ Item Categories, Item Upload နှင့် Order ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း ၃ ခုမရှိဘဲနှင့် Online shopping website လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုလျှင် Price, Purchases တို့မှာလည်း မရှိမဖြစ်မလိုဘူးလားဟု မေးစရာရှိလာပါတယ်။ အပိုင်းက လိုချင်တဲ့ item ပေါ်မူတည်ပြီး ဖုန်းဆက်မေးလည်းရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။
SSADM and DSDM – ဒါကတော့ Development menthods တွေပါ။ Structure Systems Analysis and Design Method နှင့် Dynamic System Development Method တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Project အတွက် အကုန်အကျခံနိုင်တဲ့ Budget ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Timeboxing – ဒါကတော့ Project အတွက် deadline ချပေးတာပါ။ ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်အပိုင်းကိူလုပ်မယ် ပြီးလျှင် developing ပိုင်းကို ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းအပြီးရေးမယ် အစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Legal , Ethical and Social Issues & Risk Management – Develop လုပ်မည့် Project နှင့် ပက်သက်ပြီး မည်ကဲ့သို့သော issues များရှိသနည်း ထို Issues များမဖြစ်အောင် မည်ကဲ့သို့ လုပ်သင့်သနည်း အစရျိသဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ Developing လုပ်နေစဉ် ဖြသစ်လာလျှင်လည်း ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းခြင်းအစရှိသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Evaluation – ဒါကတော့ Testing သဘောမျိုးပါ။ Development ပြီးလျှင် user ဘက်သို့ တန်းမချပြဘဲ Project developing ကာလအတွင်းပါ၀င်သူများနှင့် အပြင်လူ ၂ ယောက်လောက် ဖြင့် ထို software ကိုအသုံးပြုခြင်းပါ။ ထိုအခါ Errors များကျလာလျှင် သိနိုင်ခြင်း၊ Design နှင့် ပက်သက်ပြီး အဆင်မပြေတာများရှိလျှင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖြင်းအစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ပို်င်းကတော့ သင်ဟာ developing language တွေကို ကျွမ်းကျင်နေဖို့မလိုပါဘူး၊ မည်သည့်် software develop လုပ်လိုလျှင် မည် သည့် language နှင့် မည်သည့် database ပိုင်းကို သုံးသင့်သည် စသည့် အကြမး်ဖြင်းလောက်သိလျှင် လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Network သမားများအတွက် Telecom networking, banking networking, User Support Networking, Security Networking အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အားလုံးက infrastructure ပိုင်းတွင်၀င်လုပ်ရသည်ဆိုသော်လည်း မိမိ စိတ်၀င်စားသော industry ပေါ်မူတည်ပြီး Professional အနေနဲ့ပြန်သွားရတာမျိုးပါ။
Image Source: https://ko.depositphotos.com
(2) သင်ရွေးချယ်တဲ့ Speciality မှာ ရူးသွပ်နေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ရူးသွပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ တစ်မျိုးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့… သင်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာ အာရုံပိုစိုက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားစေချင်တာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိသည် ဒီအရာကိုရူးသွပ်လျှင် ထိုအရာကိုပဲ စွဲစွဲမြဲဲမြဲတပ်တပ်မက်မက် လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးပါ။ ထိုမှသာလည်း မိမိ သည်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Image Source: https://kknews.cc/tech/266gy5g.html
(3) သင်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာ Specialist တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် နောက်ထပ်သေချာစဉ်စားဖို့လိုလာတာက သင်ဟာ Technical အပိုင်းသီးသန့်သွားရတာကို စိတ်ဝင်စားသူလား ဒါမှမဟုတ် Technical (50%) Management (50%) အပိုင်းဘက်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားသူလား (ဒါမှမဟုတ်) Management အပိုင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူလား ဆိုတာသေချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Management ပိုင်းကိုစိတ်၀င်သူတစ်ယောက်ဆိုလျှင် သင်ဟာ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ပညာများကို လေ့လာသင်ယုရန်လိုအပ်ပါသည်။
Image Source: http://ww3.iransafebox.net/pics-of-cartoon-swimming/
Image Source: https://sites.google.com/site/
Image Source: https://scoopempire.com/
ဥပမာ – ကိုယ်အရည်အချင်းမမှီတဲ့ အလုပ်ကိုလျှောက်ပါ။ အလုပ်မရနိုင်ပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုအရာတွေကို လေ့လာသင့်သလဲဆိုတာ Interview မှာ သင်သိနိုင်မှာပါ။
ဒီလိုအချက်လေးတွေကို သတိထားပြီး လေ့လာမယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ IT ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ရေးသားသူ – မြတ်ဘုန်းမြင့်
နည်းပညာကျောင်းသားတွေကို မျက်စိဖွင့်ပေးမယ့် UCSY IT-Camp
← တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ITခေတ် နည်းပညာပစ္စည်းများနှင့် ကလေးငယ်များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု
လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ →